Ny sekretera jeneraly UNWTO voafidy Zurab Pololikashvili dia manana hafatra ho an'i Azerbaijan
Home » Travel Associations News » Ny sekretera jeneraly UNWTO voafidy Zurab Pololikashvili dia manana hafatra ho an'i Azerbaijan
Azerbaijan dia mpanohana be iray tamin'ny fifidianana an'i Zurab Pololikashvil voafidy ho sekretera jeneralin'ny UNWTO. Noho izany tsy mahagaga raha manome ny iray amin'ireo resadresaka voalohany nataony tamina haino aman-jery Azerbaijan.
Nilaza tamin'ny Trend News tany Baku izy hoe: "Ny lova ara-tantara, ara-kolontsaina ary voajanahary ao Azerbaijan dia tokony zaraina amin'izao tontolo izao."
Tao amin'ilay tafatafa navoaka androany dia nanohy nilaza i Zurab:
“Azerbaijan dia feno harena, samy manana ny toetra azo tsapain-tanana sy tsy azo tsapain-tanana. Mino aho fa misy ny mety matanjaka amin'ny fampandrosoana fizahan-tany amin'ny alàlan'ny varotra ny maha-azo itokiana, fomban-drazana ary kolontsaina marolafy ao amin'ny firenena miaraka amin'ireo endrika mampiavaka azy. Ny lova ara-tantara, ara-kolotsaina ary voajanahary ao Azerbaijan dia tokony zaraina amin'izao tontolo izao, ”hoy izy.
Nanamarika i Pololikashvili fa ny fampandrosoana ny fizahantany dia momba ny fanavaozana mitohy fa ny famantarana sy ny marketing ny mampiavaka ny toerana iray.
Mino izy fa ny fampiroboroboana ireo soatoavina ananan'i Azerbaijan, indrindra amin'ireo tsena vao misondrotra izay tsy dia mahazatra an'i Caucasus sy ny faritra Caspian, dia afaka mitondra fotoana maro
Mikasika ny fanatsarana ny toerana misy ny fizahan-tany any amin'ny firenena dia nilaza izy fa misy ny rafitra sy ny dinamika samihafa ary ny toerana tsirairay dia tokony hahalala izay mety indrindra.
Notsindriany ihany koa fa ny fizahan-tany momba ny lalamby dia mahazo tombony bebe kokoa amin'ny toerana rehetra satria ny fiaran-dalamby dia fitaovana maharitra maharitra mampifandray ireo zotra transnational, tranga iray mitombo eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Zurab dia mino fa ny toerana misy ny geostrategic manokana an'i Azerbaijan dia hanome lanja bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany amin'ny lamasinina any Azerbaijan, Georgia ary Torkia amin'ny alàlan'ny lalamby Baku-Tbilisi-Kars izay nosokafana tamin'ny 30 Oktobra 2017.
Raha nanontaniana momba ny fahatsinjovan'ny fizahan-tany an-dranomasina ao amin'ny Ranomasina Caspian izy dia nilaza fa mampifandray firenena dimy, kolontsaina ary fomba amam-panao maro ny Caspian, ary noho izany dia mitana ny tanjon'ny fampandrosoana ny fizahantany sy ny fanavaozana ny vokatra, izay tsy azo atao raha tsy misy fiaraha-miasa isam-paritra.
Delta Air Lines: sidina 1000 no nofoanana tamin'ny zoma 350 tamin'ny sabotsy noho ny oram-baratra ririnina